Madaxweyne Erdogan Oo Furay Masaajidka Tukiga Ugu Weyn Oo Istanbul Laga Dhisay + [ Sawiro ] |
Madaxweyne Erdogan Oo Furay Masaajidka Tukiga Ugu Weyn Oo Istanbul Laga Dhisay + [ Sawiro ]
Madaxweynaha Turkiga Racip Tayip Erdogan ayaa xarigga ka jaray masaajidka ugu weyn dalka Trukiga oo Istanbul laga dhisay.
Masaajidka weyn ee Camlica oo laga dhisay magaalada Istaanbuul oo uu madaxweynaha Erdogan xarigga ka jaray dhismahiisa waxaa la billaawday 2013-kii.
Dhismaha masaajidka weyn oo ay ku kacday lacag dhan 150 milyan oo Liiraha Turkiga oo u dhiganta ($66.5 milyan oo doolar).
Naqshadda masaajidka ayaa si weyn looga dareemayaa farshaxanka Cuthmaaniyiinta iyo farsamooyinka casriga ah ee hadda dunida laga isticmaalo.
Masaajidka waxaa halki mar ku dukan kara 63,000 oo qof, halka masaajidki hore ee Turkiga ugu weynaa ee Sabanci Central Mosque oo 1998-kii laga dhisay laga dhisay isla magaalada Istaanbuul uu awood u lahaa iney halki mar ku dukadaan 28,500 oo qof oo keli ah.
Masaajidka cusub ee ugu weyn Turkiga waxaa laga dhisay daanta qaaradda Aasiya ee magaalada Istanbuul, iyada oo dhisamaha masaajidka uu soo socday muddo 6 sana ah.
Madaxweyne Erdogan oo munaasabadda xarigga looga jarayey masaajidka khudabad ka soo jeediyey ayaa wuxuu cambaareeyey weerarrada loo geysta muslimiinta masaajidda ku cibaadeysta.
“Weerarrada magac diineed looga fuliyo goobaha ay dadka diimaha kale aaminsan ku cibaadeystaan ay tahay fal argagixisanimo oo aan wax xiriir ah la lahayn jihaad.” ayuu yiri madaxweyne Erdogan.
“Dadka masaajidda weerara ama kuwa kaniisadaha weerara labaduba waxay wadaagaan maskax aad u qarriban, waxayna labaduba cadow ku yihiin bani aadaminimada” ayuuna sii raaciyey Mr Erdogan.
Masaajidka cusub ee Camlica oo ugu weyn Turkiga lagana dhisay magaalada Istaanbuul wuxuu leeyahay Lix minaaradood oo u taagan Lixda tiir uu islaamku ku taagan yahay.
“Aniga ayaa ah duqa cusub ee Istanbul”
Dhismaha masaajidka waxa qayb ka ah Madxaf looga talagalay in lagu keydiyo laguna soo bandhigo taariikhda iyo ilbaxnimada Islaamka uu dunida ku soo kordhiyey, hoolal shirarka looga tala galay iyo goob gawaarida la dhigto.
Munaasabadda xarigga looga jarayey masaajidka ugu weyn dalka Turkiga waxaa ka soo qayb galay martisharaf daafaha caalamka ka kala socotay oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha Albaniya Ilir Meta, Madaxweynaha Guinea Alpha Conde, Madaxweynaha Senegal Macky Sall, Ra’isal wasaaraha Falastiin Mohammad Shtayyeh iyo martisharaf kale.
Naqshadda Masaajidka Camlica waxaa sameeyey laba gabdhood oo waaya aragnimo u leh naqshadeeyta dhismayaasha oo la kala yirahdo Bahar Mızrak iyo Hayriye Gül Totu.
Dhismaha masaajidkan weyn wuxuu qayb ka yahay mashaariicda waaweyn ee ay xukumadda Turkiga ay caalamka ku tuseyso awoodda dhaqaale uu weli Turkigu leeyahay iyo sida uu xisbiga AK ee talada dalkaasi haya uu hoggaaminta dalka ugu guuleystay.
Ziya Meyal oo ka faallooda arrimaha Turkiga wuxuu dhismaha masaajidka uu ku tilmaamay “Mid Turkiga uu kor ugu qaaadayo dibloomaasiyadda dhinaca dhaqanka isla-markaana uu Turkiga isaga gadayo caalamka intiisa kale.